Calcium Metaphosphate CaO6P_Zirconium Fluoride ZrF4_Dysprosium Fluoride DyF3_Lead Fluorie PbF2 ငွေ_Buy Yttrium Fluoride YF3
Liche Opto Co., Ltd. ဘီဘန်မှ ၂၆၀ မေတ္တာက္ကေတက္ကေတယ္ ၃၃၀ မိနစ်ကိယ် ဇီ ဇူ ဂျီခ် ၊ Qingdao ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ စည်းဝေး ကြီး တွေ နဲ့ ပဲ ။ အခု ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာရဲ့ တရားစီရင်ချက် ၃၀ နဲ့ ကူညီအစ်ကို ၃၀ နဲ့ အမှုဆောင်မှု ဒုံဗေဒင် ၊ ဘုရား သ ခ င့် နိုင်ငံတော် ၊ ဥပမာ ၊ ၂၀၀၉တွင် လုပ်ဆောင်မှုက RMB ၅၀၀ သန်း ကျော်ရှိသည်။ အခု ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ R&amp;D မြေကြီး ပေါ်မှား ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ပြီး မြင်ကွင်း အသုံးအနှုန်း တွေ ရဲ့ အသုံးအနှုန်း တွေ ကို အသုံးပြု တယ် ။ ကျွန်တော်တို့ အဓိက ပုဂ္ဂဇင်းများပါတယ် ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ ပုံစံ ဆား စိုးရိမ်စရာ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ၊ ကျွန် တော့် ကို အန္တရာယ်တယ် ဒုတိယ အသင်းအပင်း နှင့် အသင်းအပင်း ဒုတိယ အစီအစဉ် များသည် အလုပ် လုံခြုံရေး အုပ်ချုပ် မှု ၂၀၀၀ ခု နှစ် တွင် ကာ ကွယ် အုပ်ချုပ် မှု နှင့် ပတ်သက် ၍ အန္တရာယ် ရှိ သူများ ၏ ပထမ ဆုံး ထုတ် ဝေ သူ ဖြစ်လာ သည် ။ ဟေဗီ ၊ "Attentive Service, Quality First, သိပ္ပ္ပံပညာ ရှင်" ၏ အဓိပ္ပာယ်က ISO အရည်အသွေး အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်တွင် ခြင်း ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ ပြုလုပ်တဲ့ ဆားရဲ့ တိုးတက်မှုကို ပြုလုပ်ဖို့ ရှာဖွေတာတယ္။ အမြင့် ပုံစံ အရည်အသွေး ၊
Magnesia Fluoride MgF2
Magnesiumfluoride Molecularformula: MgF2CAS:7783-40-6 Physicalproperties: ဥပမာ ၊ Rutilelattice. Slightpurplefluorescence. Veryslightlysolubleinwater (18℃,87mG / L), slightlysolublei
အမည် – Siilicondioxide Chemicalformula:SiO2Molecularweight: 60. 084CAS14808-60-7Density Boilingpoint: 2230 ℃Solubility
လီီီီီ ီ
Lithiumfluoride Molecularformula: LiFCAS: 7789-24-4 Physicalproperties:whitecubiccrystalorpowder။ Ittwasheatedtovolatilization1100 ~ 1200 Itsmeltingpoint462 ℃. Dissolvedinacid,slightlysolubleinwater (watersol)
Calcium Metaphosphate CaO6P
Calciummetaphosphate Formula: CaO6P2CAS: 123093-85-6 Purity99%Phosphoruspentoxide63, 9-72,62% Calcium Oxide18-26,8% Freephosphoricacid0,02-0,03%Lossonignition0,02-0 035%Iron1,5-3ppmCopper &lt;0,5-1ppmChromium 〈
Potassium Metaphosphate KO3P
PotassiummetaphosphateCAS:7790-53-6 Formula:KO3PUses: opticalglass,fatemulsifier;moisturizingagents; ရေခဲ့ texturizingagent (အဓိပ္ပား
Lithium Metaphosphate LiO3P
LithiumMetaphosphate CAS: ၁၃762-75-9 Formula:LiO3P ပုံစံ: LiPO3≥99.0% Seodium (Na)≤0.01%Potassium (K)≤0.01% Calcium (Ca) ၀.0.၀.၀.၀ ၅%
ဒေါ် စီ ဒီ ဒို ဒီ ဒို မာဖော ဖက်စာ
SediumMetaphosphate Chemicalformula: NaPO3CAS: 101361-03-2Appearance:whitectallinepowderformUses: ဖျား
Magnesiumoxide ပုံစံ:WhitepowderEasyFormula: MgOMW:40. ၃၀44 ဒုက္ခ: ၃.၃၈ (25℃) 215-171-9 ရှေ့ချေတာ့: 6.2mg / L (200 ℃)
Magnesium Oxide MgO အကြောင်းအရာ အသိအမှတ်း
Magnesium Oxide MgO ကို ရောက်လာတဲ့ အခါ သူတခုကို အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။ Magnesium Oxide MgO ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး Magnesium Oxide MgO မြို့ထဲမှာ ကုလားလား။ ဥပမာ ၊ ယနေ့ ကြည့်ပါ။
Magnesium Oxide MgO လုပ်ငန်းဖြစ်သည်တယ်
၇၀ ° C ရာတွင် အမြင့်ဆုံး အပြောင်းအလဲ အရေအတွက်သည် အမြင့်ဆုံး တန်ဖိုးရှိသည်၊ ဒါပေမဲ့ အနေအထား ၊ ၉၀၀-100 ℃ အရွက်နဲ့ အဓိပ္ပာယ် မီဇေအီ ယို ကာ က် စ် မီဇီ ဒို မီဇီ ဒို ဒို မြို့ ၊
ဘဝ တွင် Magnesium Oxide MgO ၏ လမ်းခရီး
လမ်း၌ အရောင်သော အဝတ်ကို ငါတို့သည် မြင်ကြလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့ မီဇေအီ ယို ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ အဝတ်အစား တွေ ကို လည်း လုပ် နိုင် တယ် ။ Magnesium oxide ထုတ်လုပ်ဆောင်မှုတွင် Magnesium oxide ခေါ်ထားသော ရေခဲ ပြန်စွက်တဲ့ အိန္ဒိယတယ္ ဒါပေမဲ့ Magnesium oxide မှာ Magnesium oxide ရဲ့ အခန်းပါ။
ရှုထောင့် ပုံစံ ၊
အဖိုးထိုက်သော အိန္ဒိယ အစွမ်းသတ္တိ နှင့် ဆက်ဆံသော အသိအမှတ်ပြု သိပ္ပံအစည်: lithium io ၏ cathode ပုံစံ များ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ထွန်းလင်းစေခြင်းငှါ မျှော်လင့်သည်
Magnesium Oxide MgO insulating အရည်အချင်းများ
လုပ်ဆောင်ခဲ့သော Magnesium Oxide MgO သည် ကောင်းမွန်စွာ ပြုလုပ်မှုကို အံ့ဖွယ်သော အရည်အသွေး များ ရှိပါတယ်။
မြေကြီး မျှော်လင့်ချက် များသည် မြေကြီး ပေါ်လွင် ခြင်း
ဥပမာ ၊ ဟီ ဥပမာ ၊
ဇီ ရို နီ ယ်
Zirconium Fluoride ZrF4 ၏ အဓိက အချက်အလက်က္ကေတက္ ဒယ် ၊ ဥပမာ ၊ ၁၀၀၀ °C က အော်ဟစ်က် ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ရုပ်ပုံ ကို လည်းကောင်း ၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ၊